Campus Medina E.V : nahasarika mpianatra ny fampirantiana | NewsMada
Campus Medina E.V : nahasarika mpianatra ny fampirantiana
Sambany nampahafantatra ny tolotra fiofanana ho an’ny fampianarana ambony eto amintsika ny Campus Medina education village, ao anatin’ny groupe maorisianina Medine. Nosantarina ny taona 2012 ny campus amin’ny tanàna any Quatre Bornes, Phoenix, Flic en Flac ary sekoly ambony telo : Vatel, Supinfo ary ESCP Europe no nandray mpianatra voalohany ny taom-pianarana 2013-2014. Ny taona 2015, nivelatra ny tetikasa amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Afrika, India ary Oceania ary nampiasa teny roa: anglisy sy frantsay hampitana ny fahalalana rehetra. Ivontoeram-pianarana fito lehibe no nanampy ireo telo voalohany ary nisafidy an’i Maorisy handray ny masoivohony ao an-toerana. Efatra amin’ireo fito no nahazo alalana hampianatra : Universite Panthéon-Assas, Ecole Centrale de Nantes, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Nantes ary ny ESSEC Business School.
Afaka mametraka antontan-taratasy fangatahana hianatra amin’ireo sekoly ambony ireo ny mpianatra malagasy manana ny mari-pahaizana bakalorea. Ankoatra ny fifantenana ny naoty tamin’ny bakalorea, mbola mitafa mivantana amin’ireo tomponandraikitry ny ivontoeram-pampianarana ireo tanora.
Ankoatra ny fahazoana fahalalana, fenoina amin’ny fanatanjahantena sy ny zavakanto ny fivelaran’ny maha olona mandritra ny taom-pianarana.
Nahasarika tanora maro ny fampahafantarana teny Tanjombato, ny asabotsy tontolo andro lasa teo. Betsaka ireo niaraka tamin’ny ray aman-dreny hisafidy ny tolotra mety mifanaraka amin’ny lalam-piofanana tadiaviny. Efa nisy rahateo ny tomponandraikitra nikarakara ireo vonona ny hanohy fianarana ambony amin’ireo sekoly ao anatin’ny Campus Medina education village ao Maorisy.